FSF inopa tsananguro pamusoro pesarudzo yaRichard Stallman | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga takasvika kwavari las palabras kuti Richard Stallman akatungamira kune vatsigiri vemahara software. Yakanga iri mukupindura kumushandirapamwe wekudzima kukanzuru uko makambani nevamiriri vezvematongerwo enyika vakamurongera. TYemahara Software Foundation yakasarudzawo kuenda kunze kunopa tsananguro uye ikadaro mu nzvimbo imwechete webhu kupfuura RMS.
1 FSF inopa tsananguro
2 Institutional shanduko
FSF inopa tsananguro
Pasi pemusoro wenyaya "FSF Council Statement pane Sarudzo yaRichard Stallman" iro sangano rakaburitswa:
Nhengo dzekuvhota dzeFree Software Foundation, kusanganisira bhodhi revatungamiriri, Akavhota kusarudza Richard Stallman pachigaro pakanzuru mushure memwedzi yakati wandei yekukurukurirana kwakazara uye kufunga kwakadzama.
Zviri pachena kuti sarudzo ine gakava yakadai ingadai isina kutorwa dai yanga isina kubvumirana. Zvikonzero zvechisarudzo zvinotsanangurwa pazasi.
Takasarudza kudzosa RMS nekuti takarasikirwa nehungwaru hwake. Yake nhoroondo, yepamutemo, uye yehunyanzvi nzwisiso yemahara software haina kufananidzwa. Ane kunzwisisika kwakadzama munzira idzo matekinoroji anogona kubatsira mukuvandudza pamwe nekuderedzwa kwekodzero dzevanhu dzakakosha. Yako yepasi rese network yekubatana yakakosha. Anoramba ari nyanzvi yekunyanzvi uye mudziviriri werusununguko mukomputa.
Ivo vanoenderera pamwe neasina basa genuflection akananga kuhudzvanyiriri hwezvematongerwo enyika.
RMS inobvuma kuti yakanganisa. Anodemba nemoyo wese, kunyanya mashandiro aakaita pamusoro pake zvakakanganisa mukurumbira uye basa reFSF. Kunyangwe hazvo maitiro ake achiramba achinetsa kune vamwe, ruzhinji rwebhodhi vanonzwa kuti maitiro ake akatsamwa uye vanotenda kuti kufunga kwake kunosimbisa basa reFSF kune chinangwa chayo.
Ivo vanobva vabvuma kuti vakamedzana.
Isu tinotora mutoro wakazara wekuti takabata zvisina kunaka sei nhau dzesarudzo yako kune chinzvimbo chebhodhi.. Isu takanga taronga kuyerera kweruzivo iyo isina kuurayiwa nenguva kana kuunzwa nenzira kwayo.
Vashandi veFSF vanofanirwa kunge vakaudzwa uye kutanga vabvunzwa. Chiziviso cheRMS paLibrePlanet chakashamisa chose kune vashandi, kune vese avo vakashanda nesimba kuronga chiitiko chikuru, kune vatauri veLibrePlanet uye kune vanoratidzira. Isu takatarisira kuita kwakawanda uye kufunga uye tinokumbira ruregerero kuti hazvina kuitika.
Ipapo vanobva vatsanangura iro basa raStallman
Mune chinzvimbo chayo pabhodhi, RMS ine mabasa akafanana neayo mamwe mitezo. Iwe uri wekuzvipira usingabhadharwe uye uri pasi pemitemo yesangano, kusanganisira zvinorambidzwa pamakakatanwa ezvekuda nekushungurudzwa pabonde uye avo vanotsanangura maitiro ekuridza muridzo uye mabasa echokwadi. Iwo mabasa eboka revatungamiriri anotsanangurwa pano
Isu tinotenda kuti maonero ako anozonetsa kuFSF apo isu tichifambisira mberi basa uye tichitarisana nematambudziko ari mberi kwesoftware sununguko.
Vachipindura kuchikumbiro cheshanduko munzira yavo yekugadzirisa masangano, vanosimbisa kuti:
Mumavhiki apfuura, bhodhi rakazvipira kuita shanduko dzinoverengeka dzine chekuita nekutonga kwesangano, kusanganisira zvirongwa zvekutora nzira iri pachena uye yepamutemo yekutsvaga vakwikwidzi vakakodzera kuti vave nhengo dzedare idzva, shanduko mune ramangwana kumitemo yesangano, uye kuwedzerwa kwemumiriri wevashandi kubhodhi revatungamiriri.
Vakasarudzwa nevashandi veFSF vakabatana, maneja masisitimu Ian Kelling akasarudzwa munaKurume 28 kuzadza chinzvimbo chitsva mubhodhi revatungamiriri senhengo yekuvhota.
Ivo zvakare vanoita zvimwe zvipikirwa.
FSF bhodhi revatungamiriri richaenderera mberi nemamwe mazano uye zviito zvine chinangwa chekuvandudza kujekesa uye kuzvidavirira.
Kuchine basa rakawanda rekuita. Isu tinoona kudiwa kwekukwezva chizvarwa chitsva chevashandisi verusununguko vevashandisi uye kukura kufamba. Isu tichazivisa nharaunda nezvedu hurukuro uye zviitiko zvatiri kuenda kumberi.
Sezvatiri kushanda pazvinhu izvi, Ngatirege kukanganwa chinangwa chekufamba kwedu, kana basa rakakura revashandi vedu uye nevanhu vese vakanaka mune yemahara software nharaunda vakazvipira kurusununguko rwevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » FSF inopa tsananguro pamusoro pesarudzo yaRichard Stallman